Suldaan Xisbiyadda u soo jeediyay inaanay Hargeysa u soo sharixin cid aan ahayn beelaha deegaanka | Somaliland.Org
Suldaan Xisbiyadda u soo jeediyay inaanay Hargeysa u soo sharixin cid aan ahayn beelaha deegaanka
June 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi oo ka mid ah madax-dhaqameedka Hargeysa ayaa ku baaqay in ururada iyo xisbiyadda qaranku aanay doorashadda goleyaasha deegaanka u soo sharaxin magaalada Hargeysa musharixiin aan u dhalan reeraha degan degmada Hargeysa. Waxaanu tilmaamay in caasimada Hargeysi tahay degmo ay degaan ardaayo deegaan ku ahi.
“Waxaan Ururadda iyo axsaabta siyaasadda u soo jeedinayaa uguna baaqayaa inaanay doorashada Goleyaasha deegaanka aanay u soo sharixin magaaladda Hargeysa murashaxiin aan u dhalan degmadda Hargeysa. Waayo Magaalada Hargeysa waa degmo ay degaan ardaayo deegaan ku ahi,”ayuu yidhi Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi oo maanta u waramayay qaar ka mid ah saxaafaddu.
Suldaanku isagoo hadalkiisa sii watayna wuxuu yidhi “Ururka ama xisbiga degmadda Hargeysa u soo sharaxa musharixiin aan ahay reeraha deegaanka ah, waxaanu u cadaynaynaa inaanu wax cod iyo taageero ah ka heli doonin bulshadda. Haddii la doonayo in Hargeysa noqoto caasimad waa in la ansixiyaa xeerkii caasimadda oo muddo badan Golaha wakiilada horyaalay isla markaana la xadeeyaa bedka dhulka caasimadda oo aan xadaysnayn meelo badana muran ka jiro.”
“Doorashada Golaha deegaanka ee lagu wado inay dalka ka dhacdo dhawaan waxa lagu dooranayaa xildhibaanadii ummadda reer Hargeysa u fulin lahaa adeegyadooda bulshadda, waxaan qabaa nin aan u dhalan reeraha degan Hargeysa haddii uu ku soo baxo doorashada inaanu daynayn inuu wax u qabto umadda sababtoo ah maba aha deegaan. Waxaan mar kale ku baaqayaa in la ilaaliyo degmonimada Hargeysa oo aan cid aan ka soo jeedin ardaayada degan aan loo ogolaan inay is sharaxaan.”ayuu yidhi Suldaan Xuseen.
Previous PostHargeysa: Dadweynaha iyo Dareenkooda Kulankii madaxweyneyaasha Somaliland Iyo SoomaaliyaNext PostWefti Xukuumadda ka tirsan oo gaadhay Ceerigaabo, kana hadlay shir beeleed ka furmaya magaalada	Blog